Bhizinesi Rekutengesa - Runhare Spy & Nhare Spy Niche - Runhare Spy
Bhizinesi Rekutengesa - Runhare Spy & Nhare Spy Niche
Uri kutsvaga kutenga bhizinesi here?
Iyi makore manomwe ekubatsira webhusaiti iri kutengeswa nemuridzi.
Kubvunzurudza / Bata Mutengesi
Ndokumbirawo uise izvi mune yemusoro wenyaya: Meseji inoenderana nekutengesa webhusaiti
Nhare mbozha mbozha Spy & Surveillance Software (APPS).
SEO + Yakabatana
Vashandi venguva yakazara
Avg. Mariro / mwedzi
(Yakawanda yacho ($ 300) ndeye Click Funnels, software yeiyo faneli chivakwa. Inoshandiswa kutsika kumhara uye kutengesa mapeji uye Email kushambadzira. Unogona zvakare kumhanya webhusaiti isina izvozvo.)
Avg. Revenue / mwedzi
Nhare Spy ndeye webhusaiti iyo inobatsira vanhu kudzidza zvakawanda nezve nhare yekuongorora uye kuongorora. Inoongorora akanakisa maapplication uye inodzidzisa zvese kubva pakuisa spy app, maitiro ekushora pane chimwe chinhu senge GPS, netiweki dzekufambidzana, kufona uchiteerera.
Iyo hombe sosi yekutengesa ndeye organic traffic kubva kune ekutsvaga maratidziro.
74% Google uye 37% yemotokari traffic yeUS.
Bhizinesi rako rinoita sei mari?
Iyo webhusaiti inoita mari nekuita yakabatana kutengesa. Main maapplication ekutengesa ari FlexiSPY, mSpy, Highster Mobile uye Spyera.
Nei mumwe munhu achifanira kutenga bhizinesi iri?
Nekuti bhizinesi iri rine mukana mukuru. Munhu wese mazuva ano ane nhare mbozha. Uye munhu wese anoda kutsvaga zviri kuitwa nevadikani vavo.
Makwikwi muiyo niche haina kusimba kunyange iri kukura.
Iwe unogona kutenga iyo webhusaiti uye rega igare ipapo apo iwe unowana mari yekungoita kana iwe unogona kuivandudza uye kukura mari.
Muridzi wenguva yemberi angavandudza sei bhizinesi iri?
Iye muridzi wenguva yemberi anogona kuwedzera kuvandudza Youtube chiteshi nekugadzira mashoma mavhidhiyo.
Unogona kushandisa nani Facebook peji.
Iyo webhusaiti yakangotsvedza kune yechipiri Google Tsvaga peji kune imwe yakakosha software ongorora mazwi akakosha. Saka nekudyara kushoma mukubatanidza kuvaka, muridzi wenguva yemberi anogona kuwana mibairo mikuru, nekukurumidza.
Muridzi wenguva yemberi anogona kuwedzera kugadzirisa dhizaini saiti. Chinguva chiduku.
Navigation inogona kuvandudzwa, yekubatanidza kwemukati zvakare.
Mimwe mitezo yakakosha inogona kuvandudzwa zvakanyanya nekungoita kuverenga kuverenga kwehunyanzvi.
Vanyoreri veemail vanogona kushandiswa zvirinani.
Yakasimba SEO kuvapo.
Mazhinji maapplication ane inodzokororwa mari mushure mekutengesa kwekutanga saka unoita mari kunyangwe makore mashoma mushure mekutengesa kwekutanga.
Phones Spy ndiyo yekare yakabatana webhusaiti kunze uko. Kushanda kubvira panguva apo Spyera yaidaidzwa kuti Spyphone, uye Stealth Genie uye SpyBubble ndiwo mapurogiramu ainyanyo kufarirwa.
Mikana yemuridzi mutsva
Kuvandudza Email kushambadzira. Parizvino maemail ekutevera chete anoshandiswa. Hapana nhepfenyuro yezuva nezuva. Munhu anoziva zvekuita anogona kushandisa zvizere vese vanyoreri veemail.
Mazuva akakosha mashandiro ezuva nezuva
Kunze kwekupindura mibvunzo uye neapo neapo zveWordPress zvinogadziridza hapana chimwe chekuita.
Vatengi vanhu vanofarira kuongorora uye kuongorora nhare mbozha nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vatengi vanowanzouya kubva kumativi ese epasi zvishoma zvishoma kubva kunyika dzinotaura Chirungu.
Sekureva kweTOS, kuongororwa chete kunotenderwa mune zhinji dzenyika mwana wechidiki uye mushandi neruzivo rwavo.
Ramangwana muridzi achawana iyo Website, email kero, inotongwa, social media account, kumhara & mapeji ekutengesa muClick Funnel uye nekutevera kuteedzera kweEndaneti kushambadzira.
Email rondedzero yekutenga zvakare inogona / kutaurirana (~ 40 000 vanyoreri).
Facebook: 5048 anoda
Twitter: 7609 Vateveri
YouTube: 307 vanyoreri & gumi nemaviri mavhidhiyo
Google+: vateveri mazana mana nemakumi matanhatu nevatanhatu
Ini ndichakubatsira iwe kuendesa uye kumisikidza zvese. Zvakare kana iwe uchinge uine chero dambudziko mushure mekutenga ini ndichagara ndichipindura uye ndichiedza kukubatsira.